I-FastCAD, isithunzi se-AutoCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/FastCAD, i-AutoCAD Shadow
Ukuba babengazange bakuve nge-FastCAD ... bafanele.
Ndiyazi, kunokwenzeka ukuba okokuqala bayayazi ukuba le nkqubo ikhona, kodwa ndifuna ukuthatha ixesha eliphuma kulobu busuku be-ayisikrimu kunye nee-cookie ze-Oreo ukubonisa isixhobo esinazo into esinokuyifunda kuyo kumhlathi wokugqibela.
Kutheni i-FastCAD ibalulekile
Ewe, umdali we-FastCAD nguye owakhula I-INTERACT, loo nkqubo yayiyi-prototype ezithengwa ngabasunguli be-AutoDesk ukuzisa i-AutoCAD.
Nangona kunjalo, ngaphaya kobuhle obuhle bomhlobo wam waseNyakatho Melika, le nkqubo yafumana ukufaneleka okubalulekileyo ekuqaleni kwee-90; Riddle kwakhona ukhethwe Design News Engineer woNyaka 1992 kunye 1999 Engeneering News-irekhodi balifaka i Top125 abantu abaninzi nempembelelo kwishishini lokwakha kwiminyaka yakutshanje 125.
Emva koko wabeka Evolution Computing ukuba kwi-1985 iqala inguqulo yokuqala ye-FastCAD, ngokuqinisekileyo kwi-DOS.
Kwi-1987 le nguqu ibandakanya "ukucima" amaqhosha, iimpawu kunye neebhokisi zencoko yababini ngaphambi kokuba kwenziwe -okanye ikhona- Windows.
Kwakhona ngelo xesha ndandinayo icebo kunye nokulawulwa kwendlela, ukuxhomekeka kwezinto ezenzeka kwi-AutoCAD kwiphepha.
Okwangoku inguqulo FastCAD entsha i 7.56, utshintsho zabo kutshanje yaqalwa ngonyaka 2007 kwaye ababandakanyekayo inyathelo ifomati bit 32.
Into enhle malunga ne-FastCAD. Okokuqala, intlonipho yam kwi-Riddle xa isiza kuphuculo oluqhutywa ngumsebenzisi. Ndandiyivavanya ixesha elide kwimpelaveki kwaye nangona iyisoftware eyasungulwa kwiminyaka eli-10 eyadlulayo, iyothusa kwezinye izinto zokusebenza okufihliweyo apho; nangona kufuneka ndilumkise ukuba ukufunda ukusebenzisa okuninzi kokusebenza kwayo kuthetha ukutshintsha indlela yokwenza ezinye izinto kwiinkqubo esizisebenzisileyo. Kwaye nangona ndicinga ukuba le nkqubo sele inike into ekufanele ukuba yenziwe, kwiqonga langoku, kufanelekile ukuba uyiqonde indlela eye yanegalelo elihle kum; Ngubani owaziyo ukuba ezinye iinkqubo ezikhuphisanayo kufuneka zigcine iso.
Lee neefomathi dwg uguqulelo lakudala (2010 leyo usebenzisa AutoCAD 2012). format FastCAD yi FCW, kodwa ayikwazi ukuvula ugcine izakhiwo njengoko dwg ukusuka R12 ukuya 2010).
Funda iifomati ze-Microstation ze-DGN V8, kule ndawo kwaye ngasentla zinemiqathango yazo ezininzi iinkqubo ihlawulwe kwaye ivulekele imvelaphi (siyaqonda ukuba kutheni, kodwa makhe sihlole indlela i Riddle yenza ngayo.
Inomzekelo ofanayo ukhetho lokufaka umboniso onamandla ( uqobo lwe-AutocAD 2012 kunye neBentley V8i), ngamaqhosha angaphezulu kokusebenziseka ngakumbi kunokumisela iinketho zembono kwiMicrostation. Amaqhinga okusebenzisa ukusondeza phakathi kweefestile alunge kakhulu, kuba iskripthi semouse, ngokuxhomekeke kwisitshixo esisicinezelayo, singenza okuqhelekileyo, ukusondeza okunamandla, ukujikeleza kwi-axis eyahlukileyo okanye kwi-isometric; Ukuphathwa kweendlela ezimfutshane zekhibhodi kuyile kakhulu kwizixhobo ezahlukeneyo ze-FastCAD.
Owona msebenzi ungcono, osebenzisanayo kunye neefayile. Ngaphandle kweembono ezigciniweyo kubandakanya iindlela ezimfutshane kwiifayile kwaye inokhetho olubizwa ngokuba sisalathiso zifake iifayile, njenge-xref, kodwa kunye nenketho yokuyihlela kwi-fly (i-xref ifundwa kuphela) kwaye kunye nokusebenza okubizwa ngokuba inxalenye apho kunokwenzeka ukudala imibutho yezinto kunye namalungiselelo nokuba ngaba ziifayile ezahlukeneyo, ezi zikhethiweyo zivela ngaphandle. Eyoyikisayo.
Ukusebenza kweetafile kukunethezeka, njengoko zinamandla. Ikholamu ye-autonumeric inokwenziwa, kubandakanya ukungenisa idatha kwi-excel (csv) okanye kwifayile ye-txt. Nje ukuba ifayile iguqulwe ibe yi-dwg ilahlekelwa ngamandla njengoko ixhaphazwa.
Kukho isixhobo indlela -kuphi phakathi kwezinye izinto- kudala izindonga, ezifanayo ezininzi, kunye nohlobo olutshintshayo, apho ekudibaneni neendonga ngokudala ngokudala imibutho (ngaphandle kokusebenzisa ikhefu, i-trim nezinye izigulane), Ungabuzobela kwaye ubutshintshe ububanzi beendonga ngaphandle kokuphulukana nomyalelo, ukongeza ungafaka ukusikwa kwemingxunya yomnyango kunye nokuphela kokuphela kodonga. Luxury kunye practical popmenu, ukuyidlulisela kwi-3D yinto yokuthetha, kubonakala kulula.
Kukwakhona izinto ezininzi ezisebenzayo kwinqanaba lomdibaniso webar yombala ngasekhohlo kwisitayile seCorelDraw, ngokuchofoza nje, i-combobox engentla ukubona ukuba sisebenza kweziphi iimeko: uhlobo lomgca, ulungelelwaniso, ubukhulu, umaleko, njl. Ndifumana ujongano lomsebenzisi lusebenza kakhulu, lusasazwe kakuhle, ngaphandle kweebar zesixhobo ezininzi kunye neepaneli ezintsha ezivela eziphelweni zokuphatha amathala eencwadi (iiseli).
Ngaba ezinye izinto ezilula ukuba ukhuphiswano kuye kwacotha ukuba bazilahlele ukuba bahambe, njenge ukungxolisa umbhalo (by okukodwa), sondeza imboniselo ukugcinileyo, isiphathi kuyasebenza kakhulu kwaye iquka factor ukunyamezela elisombulula iingxaki ezininzi.
Ayinayo yonke into, kodwa inkwenkwe bayitshayile ukuze ibandakanye eyona nto ihleli kuyo. Kubonakala njengam Inkqubo ye-AutoCAD xa ufundisa imiyalelo ye-25; izixhobo ezingundoqo zokwakha zonke (nangona ezinye logic ukutshintsha) kwaye zijolise uhlelo 8 kodwa Ukrainian lunee ntlobo imiyalelo ayimfuneko afana Khuphela kuquka rhuqa iinketho, onamandla, zijikeleziswe kunye scale ulingano.
Ubamba iskripthi, iimacros kunye netafile yedijithali. I-3D ijongeka ilula kwaye unikezelo alukhangeleki mbi nangona yayinjalo kwiminyaka eli-10 eyadlulayo; kodwa ineeflethi zayo xa ungenisa izinto ze-ACIS ngaphandle.
Kukho olubizwa EasyCAD US $ 300 kunye 600 US $ FastCAD anda yenza enye enoqoqosho endaweni pirating, kodwa uluvo lwam kule ubuya ukhetha i uhlobo IntelliCAD BitCAD o ProgeCAD okanye GstarCAD ukuba iRibbon ifakiwe.
Ewe, ukuqala, yinguqulelo ethi nangona ihlaziyiwe kwiminyaka yakutshanje, iigrafiki zayo ndicinga ngokufanayo kwiminyaka eli-10 eyadlulayo, ndicinga ukuba yayiyeyona ilungileyo xa iRiddle yaphuhlisa i-FastCAD 7. Oko kudala umda omkhulu xa kuthelekiswa nezixhobo zokhuphiswano Kutshanje, abasebenzisi sele beqhelene nokufumana unxibelelwano ngokuhambisa imouse ngaphezulu kwezinto okanye ukukhangela i-snap. Eli candelo le-snaps kunye nolawulo lokungafihli nto lufana ne-AutoCAD R13 okanye iMicrostation J, ukuze ufumane umbono.
Obu buthathaka bangaphambili buthetha ukuba uninzi lwento esele siyikhankanyile njengezibonelelo ziwohlokile, zincinci ngoku kwaye nabani na ngaphandle kwenqobo enkulu unokukujongela phantsi ukubanakho. Kwi-Windows 7 kukho ubunzima obunzima ngamanye amakhadi emizobo, ngakumbi kwii-Windows 7 zokufakwa koomatshini abadala, njengakwiWindows Vista eneefonti ezisekwe kwi-bitmaps. Konke ukuba yinjineli yemizobo ephelelwe lixesha.
Ke inohlobo oluthile lokungaqondakali ngokuphathwa kwemiyalelo eqhubekayo, ngakumbi phakathi komgca wokuyalela kunye neqhosha lasekunene kunye nezinye iindlela ezivulekileyo kwikhonsoli eblue, ndicinga ukuba kukho iqhinga elithatha ixesha ukuliqonda. Kwinqanaba lokusebenziseka, ulawulo lweengqimba alusebenzi kangako, kula maxesha sinezinto ezininzi kwaye sihlala kunqakrazo ukucima, ukuvula okanye ukubanda kungekuphela kwifayile esetyenziswayo kodwa nezo kubhekiswa kuzo.
Kucacile ukuba iprogram yimicimbi ukuzisebenzela kweesoftwe, akukho ukufunda iifayile natively DGN, DXF, DWG kodwa ibalulekile kwifayile FCW, nto leyo izisa nezingalunganga ukuba ngaphandle kwakhona, ingakumbi ukubonisa esemgangathweni isiphathi, ngoko ine- ukhetho ngokuxhaphaza -into endiyifumanayo iyingozi-Kwenzeka into efanayo kwezinye iimeko ezinobungakanani bokubhaliweyo. Ndiyikhangele kwaye andifumananga ndlela yokulayisha iifayile ze-raster, ibetmap efakwe ngaphakathi, kwaye ayiziphathi iinkqubo ze-georeference.
Nangona bebanokuqulunqwa kweendlela zokushicilela, ndicinga ukuba iyancipha ekulawuleni amaphepha amaninzi kwaye isizukulwana se-pdf sibonakala sisimangalisa.
Kuyaqondakala ukuba, i-FastCAD ye-2D kunye ne-3D yoyilo lwe-CAD, kwaye iyenza kakuhle. Kodwa akukho nto yimbi; akukho zinkqubo zincedisayo zobunjineli, i-Architecture, i-GIS okanye enye enxibelelana nayo. Ayisiyonto imbi leyo, yile ndlela kwaye ukuba nje uthi "yindlela ekuyiyo i-FastCAD" akukho sono, kodwa iyayisusa inzuzo kuba ngoku phantse akukho mntu wenza i-CAD emsulwa kodwa uyayisebenzisa ukuhlela idatha kuqeqesho oluthile.
Kwaye okokugqibela, akukho miqondiso yenguqulo entsha; ayisiyiyo le. Ukuba inkampani icinga ukwenza i-FastCAD 8, ngokuqinisekileyo luphuhliso olutsha (okwangoku kubonakala ngathi lusetyenzisiwe kwiVisual Basic kunye nolwimi lweC ++). Ukufuna ukuya kwiinjini yemizobo emitsha kungathetha ukusebenza ngokuhambelana kwe-NET kwaye… andiqinisekanga nokuba iRiddle iyayicinga loo nto.
Ekugqibeleni, isifundo asigqibekanga ngaphandle kokuba sifunde iingcamango ze-Riddle, ethi kwibhlog enamangeniso ambalwa isikhululele ukuvuma phakathi kwemigca. Ukufunda asinakuphepha i-halo ye-nostalgia, ukungabikho koncedo ngenxa yokungabikho kokusesikweni kwesoftware elungileyo etshabalalayo phambi kokuthandwa kwaye, siyaqonda nokuba uMike ungaphezulu kokuba ngumrhwebi wetekhnoloji, ungumvelisi ophoswe kumbongi wezobuchwephesha kwezo ziyafuneka namhlanje usuku kwindawo efanelekileyo.
Siyazi kwakhona ukuba kusemva kwesoftware entsha, ngakumbi okanye ngaphantsi siqonde uhlobo oluthile, ngubani owaziyo ukuba inguqu yokuvuselelwa kwakhona ye-FastCAD, kunye neqhinga lokudibanisa lokubambisana eziyimfuneko kakhulu kuphila ngaphezu kwe-10 iminyaka.
Intlonipho yam ngendoda emisela izikhokelo ngendlela ezininzi iinkqubo ezenza ngayo i-CAD namhlanje, ibeka imibono ngezimvo ezingekhoyo. Amathuba kukuba iRiddle ibone into ayithengisayo, ngewayenyanzelisile ukuba liqabane le-AutoDesk (nangona kwakungomnye wabasunguli be-18) endaweni yokuthengisa imveliso yakho kwaye uhlala ngaphandle kwezinto ngoku i-emporium ezinzima ukuthunjwa.
Umhlobo waseMntla waseMerika -i-grouper enzima ngamahlaya-Undixelele ngenye imva kwemini eCafé Colombiano ukuba iRiddle yahlala ngaphandle kuba ngela xesha uWalker waseka i-AutoDesk wayethenga isitshetshe, kwaye hayi kanye ukusika iindevu zakhe ...